Mubvunzo: Kumhanya Kunobatsira Kuchovha Kwangu - BikeHike
Kumhanya kunokuvadza kuita bhasikoro here?
Vatyairi vemabhasikoro vanoda kumhanya here?
Mutyairi webhasikoro anofanira kumhanya zvakadii?
Ndomhanya here ndisati ndachovha bhasikoro?
Ndinokwanisa here kumhanya nekutenderera zuva rimwe chete?
Sei vatyairi vemabhasikoro vasingakwanisi kumhanya?
Sei zvakaoma kumhanya mushure mekuchovha bhasikoro?
Zvakaipa here kumhanya wapedza bhasikoro?
Kuchovha bhasikoro kana kumhanya kuri nani here kuti urambe wakagwinya?
Ko Cycling ichachinja sei muviri wangu?
Zvakanaka here kutenderera mushure mekurovedza muviri?
Ndinofanira kuchovha bhasikoro kwenguva yakareba sei kuti ndiite maekisesaizi akanaka?
Vatyairi vemabhasikoro vakakwana here kupfuura vamhanyi?
Maminitsi makumi maviri ebhasikoro pazuva rakaringana here?
Unogona kurasikirwa nemafuta emudumbu nekuchovha bhasikoro?
Kumhanya kwakaoma kupfuura kuchovha bhasikoro here?
Kuchovha bhasikoro kana kumhanya kurinani kune VO2 max?
Maminiti mashanu mamaira akanaka pabhasikoro here?
Kuchovha bhasikoro kunoita kuti uve mumhanyi anononoka here?
Kumhanya nekuchovha bhasikoro kunoshandisa tsandanyama dzakafanana here?
Sei kuchovha bhasikoro kuchiita kunge kuri nyore pane kumhanya?
Kuchovha bhasikoro kunoita kuti matako ako akure here?
Kuchovha bhasikoro kunoita kuti makumbo ako akure here?
Zvakanaka here kubatanidza kumhanya nekuchovha bhasikoro?
Kuchovha bhasikoro kunogona kukupa abs here?
Zviri nani kutanga bhasikoro kana kumhanya?
Maira mangani ekuchovha bhasikoro akaenzana nekumhanya?
Ndodzidzira sei bhasikoro nekumhanya?
Kuchovha bhasikoro kwakaoma pane kumhanya here?
Kuwedzera Cardiovascular, Muscular Strength uye Exercise Tolerance. Mukuwedzera kune hukuru hukuru hwemapfupa, kumhanya semuchinjika-kurovedza muviri kunogona kupawo zvakasiyana zvachose aerobic ruzivo kune mutyairi webhasikoro, zvichiita kuti uwedzere masimba uye muscular kutsungirira.
Paunenge uchimhanya, kukuvara kwemhasuru fiber kunoitika kwakakura zvakanyanya kupfuura kukuvadzwa kunoitika paunenge uchichovha bhasikoro. Nokudaro, maawa maviri aerobic run session ichava dambudziko guru kumuviri wako kupfuura maawa maviri ekudzidzira aerobic pabhasikoro.
Mushure mechinguva chiduku chekupera-kwe-season break, nenzira dzose dzinosanganisira kumhanya muhutano hwako hwechando. Munguva ye 'general conditioning' chikamu chekudzidziswa hazvina basa kuti unogara wakagwinya sei kwenguva yakareba sezvaunoita, uye nenzira iyi kumhanya kunogona kubatsira kuchovha bhasikoro.
Iwe unofanirwa kushanda kusvika pakukwanisa kumhanya maminitsi makumi matatu zvakanaka, usinganzwe kurwadziwa kukuru zuva rinotevera. Zvimwe zvinokanganisa kushivirira kwemuviri pakumhanya zvinosanganisira: Nguva (Total time spent training) Nzira (Marudzi ekudzidziswa anoshandiswa).
Mhinduro pfupi iyo munhu wese ari kutsvaga inogona kupfupikiswa. Kana uchida kuvaka tsandanyama, mhanya kutanga. Kana iwe uchida kuvaka yako kutsungirira uye aerobic kugona, mhanya kwekupedzisira. Chaizvoizvo, mhinduro yemuviri wako inoenderana nemhando yekurovedza muviri yaunopedza kuita basa rako.
Ingoziva kuti ichave yakakura cardio kubatsirwa pane tsandanyama. Kuita zvese muzuva rimwe chete kunofanirwa kuve kwakanaka chero iwe uri kuzvipa kupora kwakakwana.
Kuchovha bhasikoro kunovaka tsandanyama dzausingashandise zvakanyanya mukumhanya, nokudaro kudzivirira ma cramps nekukuvara, uye kumhanya kunovaka tsandanyama dzisingawanzo shandiswa mukuchovha, dzinoti hamstrings. Ose ari maviri anobatsira ku cardio yako, asi ndinofunga kumhanya unogona kuenda kure nekupfupika kwekurovedza muviri (cardio-wise) kupfuura iwe unogona nekuchovha bhasikoro.
Pfungwa iri apo iwe uchichinja kubva kubhasikoro uchimhanya mhasuru dzinouya kuzotamba dzinoda nguva yekujairana nekufamba kutsva uye kunetseka kunoiswa pavari. Ichi ndicho chikonzero iwe uchiwanzorwadziwa kwemavhiki maviri ekutanga ekumhanya, uye yako nhanho / yekumhanya fomu inonzwa isingaite.
Mukudzidziswa, une sarudzo. Munhu wose anobvuma kuti triathletes vanofanira kumhanya pashure vamwe kuchovha bhasikoro nenzira yekugadzirira kuita zvakafanana mujaho, asi pane zvakare kubvumirana kuti hazvina zvakakodzera kumhanya pashure pese kuchovha.
Kuchovha bhasikoro mutambo wakaderera unobatsira kuvaka kutsungirira uye kusimba. Kuenzaniswa nekumhanya, zviri nyore kuvaka nekuchengetedza simba paunenge uchichovha bhasikoro nekuti kurwadza kwemhasuru uye kukuvara kunononoka nekuda kwekudzika.
Weight manejimendi Kukwira bhasikoro kazhinji, kunyanya pakusimba, kunobatsira kudzikisira mazinga emafuta emuviri, izvo zvinosimudzira hutano kutonga uremu. Uyezve, iwe unozowedzera metabolism yako uye kuvaka mhasuru, iyo inokutendera iwe kupisa mamwe macalorie, kunyangwe uchizorora.
Tanga wakwira kana une mujaho urikuuya. "Kana kuchovha bhasikoro kuri pamberi pako, mamwe maekisesaizi ako anofanirwa kutsigira zvaunowana kubhasikoro," anodaro Hammond. Izvi zvinoreva-iwe wakazvifungidzira-iwe unofanirwa kukwira kutanga kana iwe uchida kuita yako cardio uye simba zvirongwa pazuva rimwe chete.
Ronga kukwira bhasikoro rako uye kuchovha kwemaminitsi 30-60, 3-5 mazuva pavhiki. Tanga kufamba kwese nekudziya-up. Pedal painononoka, iri nyore kumhanya kwemaminetsi 5-10. Wobva wawedzera speed kuti utange kudikitira.
Kana iwe ukamhanya nekuchovha bhasikoro kwenguva yakafanana yenguva, kumhanya kwaizoratidza kuve kwakanyanya kupisa macalorie. Iwe wakagara pasi uchichovha bhasikoro, shure kwezvose. Mutyairi webhasikoro anopisa anenge 3,500-4,500 macalorie padanho rekushanya (kazhinji maawa mashanu kana matanhatu), nepo marathoner achipisa anenge zviuru zvitatu munhangemutange imwe chete.
Kuita maekisesaizi pabhasikoro kweinenge maminetsi makumi matatu pazuva kunovaka moyo wako wemoyo uye tsandanyama kutsungirira. Iwe unogona zvakare kunzwa mazinga epamusoro esimba zuva rese, nekuti kurovedza muviri kunobatsira kuwedzera simba rako rese.
Hongu, kuchovha bhasikoro kunogona kubatsira kurasikirwa nemafuta emudumbu, asi zvinotora nguva. Ongororo yazvino yakaratidza kuchovha bhasikoro nguva dzose kunogona kuwedzera kurasikirwa kwemafuta uye kukurudzira huremu hune hutano. Kuti uderedze girth yese yedumbu, maekisesaizi ari pakati nepakati, akadai sekuchovha bhasikoro (mukati kana kunze), anoshanda kudzikisa mafuta emudumbu.
Kumhanya nekuchovha bhasikoro zvinhu zvechinyakare zvekuzvivaraidza uye maekisesaizi anofarirwa nevanhu pasi rese. Kazhinji, kumhanya kunopisa macalorie akawanda pane kuchovha bhasikoro. Asi zvakare ine simba repamusoro uye rakaoma pamamhasuru nemajoini.
Sezvo wako cardiorespiratory fitness (VO2 max) inovandudzika, chikamu chakaderera chemutoro wemukati webasa rako chinodiwa kuburitsa huwandu hwakafanana hwewatts. Kana iwe uri mutyairi webhasikoro uye mumhanyi anoshanda, uchaona kuti une imwe VO2 max yekuchovha uye yakafanana asi yakati siyanei VO2 max kukosha kwekumhanya.
Avhareji yenguva yekuchovha maira maminetsi matatu kusvika mana. 17 kusvika 18mph ndiyo avhareji yekumhanyisa bhasikoro remunhu ane hutano ari kuchovha bhasikoro ane yakanaka mhando bhasikoro pane furati uye kunyangwe nzvimbo.
Kuchovha bhasikoro hakubatsire kuti umhanye nekukurumidza. Kuti uve mumhanyi anokurumidza, unofanirwa kudzidzisa nekumhanya. Kuwedzera bhasikoro kuhurongwa hwako hwekudzidzisa hakuzokubatsira kuti uwane kukurumidza kumhanya nguva, kunyangwe ichigona kushandiswa sechishandiso chinoshanda chekudzidzisa-muchinjika kana chikashandiswa nemazvo.
Zvese zviri zviviri kumhanya nekuchovha bhasikoro zvinoshandisa quadriceps uye hamstrings, iyo inobatana kumusoro uye kumashure kwechidya tsandanyama. Makumbo ako anosimudza gumbo kuti aite nhanho paunenge uchimhanya kana pedal kutenderera paunenge uchichovha bhasikoro, nepo hamstrings yako ichikwevera gumbo pasi. Paunenge uchimhanya, mhasuru dzako dzechidya ndidzo mhasuru dzekutanga.
Chaizvoizvo, nepo makumbo ako akasimba kupfuura zvaanoda kufamba kana kumhanya, ichiri kushandisa mamhasuru akawanda kupfuura kuchovha bhasikoro. Mabhasikoro anogona, zvamazvirokwazvo, 'mahombekombe' (kureva kana uchikwira uchidzika), izvo zvinokugonesa kuti umhanye nekumhanya nguva dzose usingade kuchengetedza mwero wepamusoro wesimba remuviri.
Kuchovha bhasikoro hakukupe yakakura butt, asi inogona kukupa yakawedzera shapely imwe nekuda kweiyo cardio uye mhasuru-yekuvaka mabhenefiti. Zvisinei, kana iwe ukachovha nguva dzose nekumhanya kwakaoma uye kuramba, unogona kuona tush yakasimba - uye hutano hunoenderana nahwo, kusanganisira kushoma hudyu, ibvi uye kurwadziwa kwetsoka.
Mhinduro pfupi yekuti kana kuchovha bhasikoro kuchaita kuti makumbo ako ave akakura ndeye - kwete. Ehezve, kuchovha bhasikoro kunonatsiridza tsandanyama dzako dzegumbo, asi sekuita aerobic kurovedza muviri, kunoshanda kutsungirira kwako tsandanyama fiber, zvichiita kuti dzisanyanya kuneta paunenge uchidzidzira, asi kwete kuita kuti vawedzere.
Kuvandudza mashandiro eCycling kunobatsira kuvandudza mashandiro ekuita nekuvandudza kusimba, kusimba uye kutsungirira pasina kukuvadza mhasuru dzegumbo. Iyo yakanyanya kuderera inokonzeresa cardiovascular workout zvakare uye nekuiwedzera kune yako yevhiki yekudzidziswa hutongi zvinokubatsira iwe kuita zvakawanda nekushomeka kushoma pamuviri wako.
Kuchovha bhasikoro hakuvake abs yako zvakananga, asi kunogona kubatsira kuburitsa abs yako kana yakabatanidzwa nekudya kwakaringana uye mamwe maekisesaizi ekuwedzera. Kutasva bhasikoro kunobatsira kubvisa mafuta anovhara abs yako.
Kumhanya kunopisa macalorie akawanda pane kuchovha bhasikoro uye zvakare kwakavimbika kune toning tsandanyama, saka ne theoretically, zvinogona kuvandudza kusimba kwako zvakanyanya. Kuti uwane zvakanyanya zvezviitwa zvese, tanga kuchovha bhasikoro womhanya, uchizviganhurira kusapfuudza gumi kubva muzana yemamileage yawakachovha paunotanga.
Mutemo mukuru wechigunwe ndeye 1: 3 kana 1: 2 inomhanya kune bhasikoro reshiyo mumaira. Mune mamwe mazwi, 1 mamaira yekumhanya padanho riri pakati nepakati yakaenzana nekuchovha bhasikoro 2-3 mamaira padanho rimwe rekuedza. Kumhanya ibasa rekuita uye rinoda kuti muviri wese ufambe.
Hedzino nzira nhatu dzekubatanidza bhasikoro uye kumhanya mune inonakidza zhizha chirongwa chekudzidzira: Rovedza nesimba pakumhanya uye kupora pabhasikoro. Kana iwe uri mumhanyi ari kudzidzira nekushanda kwakaoma-kusimba kunosanganisira kumhanya kwenguva refu, kumhanya-mhanya, tempo inomhanya, uye kushanda kwechikomo, unogona kuruka mune zviviri zviri nyore-kuedza mabhasikoro workouts vhiki nevhiki.
Iyo yakanyanya kusimba-majoini ako nemhasuru zvinofanirwa kushanda zvakanyanya zvakanyanya panguva yekumhanya. Pabhasikoro, huremu hwemuviri wako hunotsigirwa nechisharo uye bhasikoro rako rinobatsira kukuendesa mberi. Kwandiri, zvinonzwa sekumhanya kweawa imwe chete kwakaenzana neanopfuura maawa maviri pabhasikoro.
Ko Mabhasikoro Anobatsira Kumhanya
Mubvunzo: Mabhasikoro Anobatsira Here Kudonha Mumhanyi
Ko Kumhanya Kunobatsira Cycling Endurance
Mhinduro Yekukurumidza: Ko Kubhasikoro Kunobatsira Kumhanya Reddit
Kumhanya Kunobatsira Kwako Kwemabhasikoro
Mhinduro Yekukurumidza: Ko Mabhasikoro Anobatsira Kumhanya Kutsungirira
Kumhanya Kunobatsira Road Cycling
Mhinduro Yekukurumidza: Ko Kubhasikoro Kunobatsira Nekumhanya Kusimba
Ko Indoor Cycling Inobatsira Nekumhanya
Inogona Kukubatsira Kuti Umhanye Nekukurumidza
Mubvunzo: Kubhasikoro Kunobatsira Here Kuti Umhanye Zvirinani
Mhinduro Yekukurumidza: Ko Kubhasikoro Kunokubatsira Kuti Umhanye Nekukurumidza